Indlela yokuqhuba iLinux kwi-Azure, Icandelo I: I-Basics - ITS Tech School
UMicrosoft uye wenza iziphakamiso ezimbalwa kwiLuxux kunye neqela elivulekileyo leqela kuyo yonke imibini embalwa yamuva. Yonke into esuka kwi-SQL Server kunye ne-Visual Studio kwi-Linux ukuze isebenze igobolondo yeBash yeblue blue kwi-Windows 10. Ewe, ngoNovemba we-2016, iMicrosoft yajoyina iLinux Foundation njengenxalenye yeplatinum. Ngona uninzi lwalo kusenokungabonakali nakakhulu okokuqala, kwaye ukusuka kwiindawo ezininzi ezibonakalayo, umgangatho weMicrosoft ukuqonda nokukhupha ngokupheleleyo i-Linux-Microsoft Azure. Ndifuna ukwabelana ngesahlulo sezona zizathu eziphambili ndiphendulele ekubeni ngumntu omkhulu ekusebenzeni iLuxux kwi-Azure.
I-Linux ingaphezulu komdlali womgca kwi-Azure
Xa ndiqala ukuphanda i-Linux kwi-Azure, ndilungele ukuthabatha indlela entsha yokujongana nokusebenza kwi-Azure. Ndiye ndisebenza kunye (ngokuqinisekileyo, ngokudlala ngokubanzi kunye) I-Azure ukususela ngokubaluleka kwayo kokuqala. Ndenze ukuhamba kwinqanaba lejineli ukuya kwisiqalo sesiseko kwaye kwanahlukileyo kwi-Azure ukuya kutshintshana ezimbini. Ndandikulungele ukuhambisa kwiLinux kwi-Azure.
Ndiya kuphuma, ndiyinyamekela. Isakhelo se-Azure sisandul 'uqobo-isiseko sayo. Isebenza ngokufanayo kwiLuxux njengoko iphumelela kwi-Windows, ngokuchanekileyo ngendlela okulindele ngayo utshintsho okanye umlilo wokubasela umlilo ukusebenzela ukuhlawula inhlonipho encinane kwisigaba esisebenzisa. Ukunyaniseka, kwakunzima kakhulu ukuchasa.
Kwixesha elikufutshane nje ixesha elide uMicrosoft uye wakhupha ukuphucula okuphawulekayo kwiingcamango zabo kunye nezinto ngokubhekiselele kumthombo ovulekileyo xa zonke zithi zenziwe kwaye i-Linux ngokukodwa. Umthombo ovulekile awubonakaliyo, sinokuthi, ukukhanya okubi. I-Microsoft Azure ibonakala ngathi le nto ibonakala kakhulu kwaye yiyona ndlela ephezulu yeMicrosoft apho ukufakwa kweLuxux kubonakala.
Enye into eqinisekisayo (ukuba uya kuyiva nakwiphina isingeniso seMicrosoft kwi-Azure) kukuba indawo ethile ngaphezu kwe-40 yeepesenti zemishini entsha eyenziwa kwi-Azure i-Linux isekelwe. Ndiye kwizethulo ezimbalwa apho zivakalisa ukuba yinxalenye enkulu yemithwalo yomsebenzi omtsha, nangona kunjalo nayiphi indlela enkulu kakhulu. Ukubonelela ngeminyaka eyi-10 ye-backback kunye nokutyhila kwiMicrosoft ukuba izinga eliphawulekayo lomsebenzi omtsha kwindawo yabo ebaluleke kakhulu iya kuba yiLuxux. Oku kuya kuba mnandi, kodwa ke ndilahleka.
UMicrosoft uye waya ekuhlanganisweni ngokukhawuleza, kodwa kunjalo ngoku. Ukwenza izixhobo ezisekelwe kwiLinux kwi-Azure zilula nje ngokwenza izixhobo ezisekelwe kwiWindows. Konke okubaluleke kakhulu, izibonelelo zeLinux zidibana nokufikelela kwi-Azure. UMicrosoft unamhlanje uhlanganiswe kunye nabambalwa abangabonakaliyo abathengisi baseLinux ukunika ulawulo kumanqanaba, isigaba kunye neenkqubo. Abathengisi, umzekelo, i-Red Hat ne-Docker inezolawulo ezingenziwa ngaphakathi kwemizuzu kwi-Azure. Ulawulo oluvulelekileyo lwemithombo, umzekelo, i-Redis Cache kunye ne-Chef ngoku ngoku iziko elithile inxalenye yesakhelo se-Azure.
Akukho nto kunzima ukwenza kunye nokujongana nezixhobo ze Linux kwi-Azure
Ubunjineli obuphambili ngaphakathi kwi-Azure kwenza iLuxi ibe ngumdlali ofanayo kwiWindows. Isiseko sefisi seziko siyahlula kwiiklasi ezintathu eziphambili: ukugcinwa, ukulungiswa nokubala. Amandla kunye nezakhono zokulawula iinkqubo kwi-Azure yi-OS rationalist, oko kuthetha ukuba baya kusebenza ngendlela efanayo nokuba baqhuba iWindows okanye iLuxux.
Into ephambili eguqukayo ngokwenene yindlela esebenzayo esebenza kumshini obonakalayo. Kulungile kwaye ngokucacileyo izicelo eziqhuba ngaphakathi kwesikhokelo sokusebenza.
Kwi-Azure unokwenza uninzi lwezibonelelo ngaphambi kokuba wenze umshini ogqithisileyo ngoko ngokuqinisekileyo ubophe umatshini ochanekileyo kwizixhobo ezichanekileyo. Ngokufanayo unako ukwenza inxalenye enkulu yezibonelelo ngokukhawuleza usebenzisa umgca wokuhamba okanye umnyango. Inkqubo iyafana nokuba unokwenza izixhobo zeWindows okanye izixhobo zeLinux.
Njengoko kuthethwa ngamaxesha ambalwa ndingumntu we-Windows, kodwa sele ndisebenzisa iklayenti le-Linux ukwenza kunye nokujongana nayo yonke into e-Azure kwithuba elithile. Okwangoku, ngokunyanisekileyo mna ngokubanzi ndisebenzisa i-shell ye-GUI, kodwa sele ndiyisebenzisa igobolondo yeBash inxalenye enkulu yomsebenzi wam nokwenza kunye nokugcinwa kwamashishini athile. UMicrosoft unikeza ilungiselelo lwezixhobo zesigaba esinqamlekileyo, umzekelo, i-CLI okanye i-XPLAT CLI kwithuba elifanelekileyo lokuba ufuna ukuwahlola, okuvumela ukuba uhlole ngokupheleleyo i-Azure. Ngokomzekelo, ukwenza umshini ochanekileyo, uya kusebenzisa:
i-azure vm yenza -Q i-canonical: ubuntuserver: i-14.04.4-LTS: yakamuva ...
Isakhiwo sobunzima bezakhono zesiqhelo sesilwimi sinokuqonda. Ndiyifumene ngokwenene isakhiwo sokuhlawulwa kwezixhobo ze-CLI eziqhelekileyo eziqhelekileyo kunezixhobo ze-PowerShell (ezo zixhobo ezifunekayo zecandelo le-Windows).
Kukho izizathu ezininzi ezingenasisiseko zokuqhuba iLuxux kwi-Azure. Khangela isigaba esibini kule nqaku apho ndiza kuxubusha ukuxolelana, ukusabalalisa, ukhuseleko kunye nokusebenza kwemisebenzi. Izifundo ezibini ezifutshane, zokufumana izinto ezikunika amava aluncedo ukuvuka nokusebenza kunye neLuxux kwi-Azure ngoku kufumaneka.
I-15 Iziqinisekiso eziphezulu zokuhlawula kwi-2017